Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Mmanya & mmuo » Mmanya bara ọgaranya Italy Ọ dịghị ihe ọhụrụ: mkpụrụ vaịn Go nwaafo
culinary • omenala • Akwụkwọ akụkọ Italy • News • Tourism • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Mmanya & mmuo
15 min gụọ
Ịtali bụ nanị obodo dị n'ụwa nke nwere viticulture na mpaghara ya niile, na-esi na ụsọ oké osimiri dị mmiri mmiri ruo n'ala ala ugwu Apennine, Italian Alps na Dolomites. Osisi vaịn na-eto site na latitude nke 36 degrees n'àgwàetiti Pantelleria kasị nso na ndịda ruo ihe dị ka ogo 47 na ndagwurugwu Alpine nke Valtelina.
Ha na-etolite na mpaghara pedoclimatic dị iche iche (microclimate dị n'ime ala nke na-ejikọta mmetụta okpomọkụ, ọdịnaya mmiri na ikuku).
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ pasent 28 nke ụdị mkpụrụ vaịn dị n'ụwa bụ ndị Italy.
Ihe karịrị pasentị 85 nke elu ala Italy bụ nke etinyere na viticulture nwere ụdị dị ogologo (n'agbanyeghị na ọ nweghị ụdị dị iche iche).
A ga-enwe mmanya na-enweghị Italy?
Ọ bụ ihe na-adọrọ mmasị ịmara na e nyere ndọrọ ndọrọ ọchịchị siri ike nke obodo ahụ (ruo na ọkara nke abụọ nke narị afọ nke 19), na mkpa ahịa ahịa obodo (n'oge 1970), na ụdị dịgasị iche iche nke ọnọdụ na-eto eto emeela ka Ịtali na-echekwa ihe. kemgwucha ọgaranya nketa nke greepu iche dị kemgbe mmalite nke oge.
Mmanya dị iche iche na mgbagwoju anya
Sangiovese, mkpụrụ vaịn na-acha uhie uhie nke Italy nke a na-akụkarị na mba, na-ekpuchi naanị pasenti 12 nke mpaghara osisi vine nke mba, ebe ogbo ya na-acha ọcha, Trebbiano Toscano, na-erughị pasent 7, na-eme ka mmanya Ịtali na-eto eto dị iche iche dị ịtụnanya. Ampelologist Anna Schneider mere atụmatụ na e nwere ihe dị ka 2000 ụdị mkpụrụ vaịn a kụrụ n'Ịtali (dị ka nke 2006). Ndị ọkachamara ndị ọzọ na-atụ aro na a chọpụtala ihe dị ka 1000 ụdị mkpụrụ vaịn a kụrụ n'Ịtali na mkpụrụ ndụ ihe nketa na-eji 600 mee ihe. mmanya na-aba uru n'ahịa.
Ndebanye aha nke ụdị mkpụrụ vaịn dị iche iche
Ọ bụrụ na edepụtaghị ụdị mkpụrụ vaịn dị iche iche na Ndekọ Mba, ọ nweghị ihe ọkụkụ sitere na ụdị dị iche iche a ga-enweta maka ịgbasa na ụlọ ahịa azụmaahịa. Ugbu a enwere ụdị mkpụrụ vaịn gọọmentị 461, mana ndị mmadụ na ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ ịgụnye ndị ọzọ. N'ime mkpụrụ vaịn iri abụọ a kụrụ n'Ịtali, 16 bụ ụmụ amaala na anọ mba ụwa (Merlot, Chardonnay, Pinot Grigio na Cabernet Sauvignon) na Merlot na Chardonnay na iri kacha elu.
Ụdị mkpụrụ vaịn: E kewara ya ụzọ atọ
Nwa amaala (ma ọ bụ nwa amaala)
Mba (ma ọ bụ mba ọzọ)
A na-ewere mkpụrụ vaịn dị ka nwa amaala ma ọ bụrụ na a 'mụrụ' ha n'otu ebe ma ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ naanị ebe ahụ ka a na-ejikọta ya. Ọ ga-abụ na ọtụtụ ndị a na-akpọ “grape ndị Ịtali” bụ ndị Grik ma ọ bụ n’Ebe Ọwụwa Anyanwụ Ụwa n’ezie, ndị agha Rom na-alọta, ndị na-azụ ahịa Finishia na ndị Gris na-achị kpọbatara. Ian D'Agata kpebiri na, "N'ikwu ya n'ụzọ ziri ezi, ọ bụghị ihe niile Mkpụrụ vaịn Italy Ya mere, bụ nwa amaala n'ezie na mpaghara nwere ike ịbụ okwu ka mma ịkọwa ụdị ala ndị ahụ na-esiteghị na Ịtali n'ụzọ doro anya. "
Mkpụrụ vaịn ala (n'adịghị ka Cabernet Sauvignon na Chardonnay) adịghị esi ike ma na-emetụta ya ngwa ngwa:
Ụzọ esi eme mmanya ochie (ya bụ, ịtụtụ mkpụrụ vaịn n'otu oge, n'agbanyeghị ntozu oke)
Enweghị ịdị ọcha nke cellar (na-atụnye ụtụ na mmebi mmanya)
Oge ufodu maturation nke mkpụrụ vaịn
Nsonaazụ (n'ọnọdụ ụfọdụ):
Ụtọ mmanya mbụ Ịtali dị iche na mmanya dị ugbu a
Mkpụrụ vaịn na-emepụta ụyọkọ nke na-enye ohere maka mmepụta obere olu
Mkpụrụ nke ụdị ụfọdụ na-ekpochapụ kpamkpam na enweghị acidity nke na-egosi mmanya na-adịghị mma
Mkpụrụ vaịn na-etolite n'oge dị iche iche na mkpụrụ osisi na-acha akwụkwọ ndụ na-acha akwụkwọ ndụ na-esote ndị tozuru oke. Enwere ike iwepụ mkpụrụ osisi na-amịbeghị; Otú ọ dị, ọ bụ usoro dị oké ọnụ ahịa, na-ewe oge nke a na-eji aka ma ọ bụ igwe nhazi ngwa anya dị oke ọnụ. Ọ bụrụ na emeghị nhazi ahụ, mmanya ga-esi na ya pụta nwere ike inwe isi na ụtọ ahịhịa ndụ ndụ.
Usoro ime mmanya nke oge a nwere ike ịdị ize ndụ nye mkpụrụ vaịn ala Italy na ọrụ nke yist nwere ike elelị. Ụdị yist dị iche iche nke a na-eji gbaa ụka aṅụrụma nwere ike ịkpata nsonaazụ enological dị iche iche ọbụna mgbe a na-eji otu mkpụrụ vaịn dị iche iche, nke toro na ala yiri ya.
Ụdị mkpụrụ vaịn ala nna (ichepụtara)
1. Aglianico del Taburno DOCG (La Fortezza Soc. Agr. Srl). Tọrọ ntọala dịka DOC na 1986; ịghọ DOCG na 2011. N'ịbụ onye dị na Campania, Basilicata (mpaghara ndịda) mkpụrụ vaịn na-emepụta reds na Roses zuru oke. Tinyere Sangiovese na Nebbiolo, Aglianico bụ otu n'ime nnukwu ụdị Ịtali atọ. A na-akpọkarị mmanya sitere na ụdị dị iche iche Barolo nke ndịda n'ihi ike ya imepụta mmanya a nụchara anụcha nke ukwuu. Mmanya a na-emepụta site na Aglianico bụ nnukwu garnet n'anya nke nwere chocolate na plum aromas ma na-eme ka ọ bụrụ nke zuru oke na tanning siri ike, nnukwu acidity na ezigbo ịka nká. Ka ọ na-etolite, mkpụrụ osisi ahụ na-apụtawanye ìhè na tannins na-edozi ahụ.
2. La Fortezza. 100% Aglianico del Taburno DOCG. Ruby na-acha uhie uhie na anya, imi na-ahụ ísì ụtọ nke blackberry ọhịa. Ọ dị nro na palate na ndetu obi ụtọ nke black cherry jam. A na-eji aka na-egbute mkpụrụ vaịn ndị ahụ na njedebe nke Ọktoba ma na-etinye ọnwa 8 na ígwè, ọnwa 10 ọzọ na barrique na mgbe ahụ na barel. Mmanya a kwesịrị ịsachapụ nke ọma tupu ịmịnye ya. Were pasta, anụ (karịsịa amịkpọ, stews na sauces) na/ma ọ bụ chiiz merela agadi.
3. Lambrusco Modena DOC (Cantina Ventiventi Societa Agricola Il Borghetto). A ga-akụ mkpụrụ vaịn na mpaghara Modena ma tinye ụdị ndị a (pasent 85-100): Grasparossa Lambrusco, Lambrusco Salami, Lambrusco di Sorbara, Lambrusco Marani, Lambrusco Maestri, Lambrusco Montericco, Oliva Lambrusco (eji naanị ya ma ọ bụ nke enyere ikike). mgbakwunye nke Ancellotta maka agba) mkpụrụ vaịn, Malbo Gentile na/ma ọ bụ mkpụrụ vaịn Fontana (ruo pasent 15). Mkpụrụ vaịn na-amịpụta mmanya na-acha uhie uhie na-egbuke egbuke nke nwere agba rubi, ísì ụtọ na ụtọ na ọnụ ọnụ nke ejiri ndetu ifuru kwalite.
Ihu igwe na-ekpo ọkụ n'oge okpomọkụ na oge oyi. Ala dị n'ala dị larịị nke Emilia Romagna bara ụbara nnu na ịnweta, ubi vine ndị dị n'akụkụ ugwu bụ ụrọ nke nwere nkume ájá na-achị, na-amịpụta mmanya na-adị mfe ma na-atọ ụtọ mgbe ọ bụ nwata.
Mmanya ndị ahụ nwere ike ịmalite na karama ma na-agbakọtakarị site na iji usoro omenala. Ịpị nwere ike ọ gaghị agafe lita 80 nke dị ntakịrị elu karịa Champagne. gbaa ụka ahụ na-apụta na okpomọkụ dị ala (ogo 23-25) iji jigide ísì ụtọ mkpụrụ ọhụrụ ma wepụta ọnụ ọgụgụ dị nta nke tannins.
• Cantina Ventiventi Rose Lambrusco Di Modenado. 100% Sorbara mkpụrụ vaịn.
Ezinụlọ Razzaboni nwere ubi-vine a n'ime obodo Modenese nke Medolla. Ubi-vine na-eji Metodo Classico, na-emepụta mmanya ndị dị ọhụrụ na nke pụrụ iche. Organic enwetara ikike na 2019, a na-ahazi iwe ihe ubi maka oge oyi kachasị mma nke ụbọchị. A na-ajụkwa mkpụrụ vaịn ndị ahụ ma pịa ya nro. A na-eduzi gbaa ụka n'okpuru okpomọkụ a na-achịkwa na igwe anaghị agba nchara na nchacha oyi dị ogologo na ígwè. A na-eme mgbakwunye nke must na gbaa ụka nke abụọ na karama n'okpuru okpomọkụ a na-achịkwa.
Pink dị nro na anya, ya na mkpụrụ osisi na-acha uhie uhie na-akwụghachi imi. Dị nro ma dị ụtọ na palate kwadoro site na ịnweta mineral. Mkpọnwụ na-adịgide adịgide na-eme ka ọ dị ọhụrụ. Jikọọ na nri mmiri.
4. Trebbiano d'Abruzzo DOC (dị ka French Ugni Blanc)
Abruzzo bụ mpaghara mmanya nke dị na etiti ọwụwa anyanwụ Italy n'akụkụ oke osimiri Adriatic. Dị ka iwu DOC gọọmentị si kwuo, a ghaghị ime mmanya Trebbiano d'Abruzzo site na opekata mpe 85 - 100 nke Trebbiano Toscano ma ọ bụ Trebbiano Abruzzese ma ọ bụ ngwakọta nke otu abụọ ahụ.
Ọ bụ Raffaele Sersante depụtara mkpụrụ vaịn Trebbiano d'Abruzzo na 1856, onye kwuru na ụdị mkpụrụ vaịn dị n'ubi vaịn na-ewu ewu na nke ukwuu. Ọ bụ mkpụrụ vaịn na-acha ọcha nke na-amịpụta elu nke sitere na South-East Mediterranean. A na-akụ ya nke ọma na ala argillo-calcareous. Ka ọ dị ugbu a, ihe ọkụkụ na-akpata ihe karịrị ọkara nke mmanya ọcha na mba ahụ.
Mmanya ndị ahụ na-acha ọla edo, nke na-adịkarị akọrọ na mkpụrụ - na-aga n'ihu na-enwe ùkwù bouquet nke mkpụrụ edo edo, apụl, lemon zest na okooko osisi ọcha ruo imi. Palate na-achọta acidity ziri ezi, na-akpali akpali, aghụghọ, mara mma plums odo. Ụfọdụ ndị na-emepụta na-eji agba agba agba na/ma ọ bụ barel maturation iji gbakwunye mgbagwoju anya, omimi na ahụ. Ọ bụ naanị DOC dị na Abruzzo ọkachamara na mmanya ọcha. Na-aṅụ nwata na oyi. Jikọta ya na pasta nri oké osimiri, risotto, ofe akwukwo nri, oven-esiere ma ọ bụ azụ a ṅara n'ọkụ.
Ezinụlọ Di Tonno malitere na Abruzzi, ubi-vine nke dị hectare 32 bụ ụrọ nke nwere nkume limestone, ala nke a na-ahazi na nke a na-agbapụta, nke dị mita 300 n'elu oke osimiri. A na-eji nlezianya họrọ mkpụrụ vaịn na mbido Septemba. A na-ewepụ mkpụrụ osisi vine ahụ ma na-esote obere oyi oyi na-atụ nke mkpụrụ vaịn a gbajiri agbaji na igwe anaghị agba nchara na-esote ịpịrị dị nro na decanting nke must. Ịṅụ mmanya na-aba n'anya na yist họrọ na-ewe ụbọchị 10; karama na-eme ọnwa ole na ole mgbe owuwe ihe ubi gasịrị.
Agba ahịhịa na-acha odo odo na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na-atọ ụtọ na-atọ ụtọ na anya, na-enye ọmarịcha ùkwù na-esi ísì ụtọ nke violet na-egosi apple, cherry na peach na imi. A na-etinye oge dị mkpirikpi na gbọmgbọm ahụ na-emepụta mmanya na tannins nke dị oke ma na-adịghị emetụ n'ahụ na njedebe ikpeazụ dị nro, dị ọcha ma dị ọhụrụ. Na-eje ozi dị ka aperitif na/ma ọ bụ jiri ọkụkọ, nri mmiri, anụ ezi ma ọ bụ ham.
Aglianico bụ mkpụrụ vaịn ojii toro na mpaghara ndịda Italy (Basilicata na Campania). A na-eche na ọ malitere na Gris ma ndị Fiọshia na-akọ ya site n'osisi vine a na-amaghị ama; Otú ọ dị, nyocha DNA ọgbara ọhụrụ akwadoghị echiche a n'ihi na ọ na-egosi ntakịrị njikọ na ụdị mkpụrụ vaịn ndị ọzọ nke Gris. Ụdị dị iche iche pụtara na mbipụta dị ka ọtụtụ nwanyị Aglianiche (1520). Ọkà mmụta ihe ọmụmụ banyere ihe ọmụmụ Denis Duboudieu kpebiri na "Aglianico nwere ike ịbụ mkpụrụ vaịn nwere akụkọ ihe mere eme nke ndị ahịa kacha ogologo." A na-eji ya eme mmanya ndị Falemia n'oge ndị Rom, mmanya a kacha mara amara na Rom oge ochie nke Pliny Okenye lere ya anya nke ọma.
Agianico bụ mmanya na-acha ọbara ọbara nke nwere usoro, acidity dị ndụ na ikike ịka nká. Aromas nke ifuru, na mgbe ụfọdụ tannins a na-apụghị ịgbagha agbagha na-abata mgbe ha na-agbalị ịnụ ụtọ mineral dị ụtọ. Ọ na-agbanwe agbanwe, na mmanya sitere na ụdị a nwere ike ịnụ ụtọ nwata na afọ nke ọma. Ugboro ugboro tụnyere Nebbiolo, nnukwu mkpụrụ vaịn nke Barolo na Barbaresco. Ejikọtara ya na mpaghara Campania dị na ndịda Italy site na Osimiri Tyrrhenian gụnyere Naples, Pompeii, Amalfi Coast, Salerno na Paestrum. Ọ na-etolite na Basilicata.
(La Guardiense - Sannio 2014). 100% Aglianico
Anya na-enwe obi ụtọ na agba ọbara ọbara miri emi na nke gbara ọchịchịrị ka imi na-achọpụta ngwakọta cherry na vanilla (si na barel), agwakọta ya na ndetu ose. A na-eji tannin na-atọ ụtọ palate na-emepụta ahụmihe ụtọ dị nro na nke silk.
A na-egbute mkpụrụ vaịn na ọkara nke abụọ nke October. Maceration n'akpụkpọ ahụ maka ụbọchị 18 na-agbapụta ntakịrị kwa ụbọchị, pasent 20 na-agba ọbara. Apres-ski zuru oke; jikọtara ya na pasta/anụ ihendori, ofe akwụkwọ nri, úkwù anụ ezi, anụ atụrụ, na anụ a gwọworo.
6. Sfozato (mmanye nke mkpụrụ vaịn) DOCG
Sfozato na-emepụta mmanya na-acha ọbara ọbara dị ike dabere na ụdị mkpụrụ vaịn Nebbiolo dị na Valtellina, ógbè dị na mpaghara Lombardy nke dị n'ebe ugwu Ịtali. Ọ na-enweta ọkwa mmanya dị elu yana itinye uche dị ukwuu site na ihicha mkpụrụ vaịn (passito). A na-ahọrọ mkpụrụ vaịn kacha mma na mkpụrụ osisi ọ bụla rere ure ma ọ bụ mebiri emebi ga-ewepụrịrị ka usoro ihicha na-etinye uche na ezughị okè.
A na-edokwasị ụyọkọ dum n'elu ahịhịa ahịhịa n'ime ụlọ ndị nwere ikuku nke ọma ebe ha na-anọ maka ọnwa 3-4, na beri ọ bụla na-efunahụ ihe dịka pasent 40 nke ịdị arọ ya n'ihi na ọ na-ekpochapụ mmiri nke na-etinye uche na mkpụrụ osisi vine. Ihe ọṅụṅụ ahụ na-aghọ sirop ụtọ na Sforzato kpochapụwo na-emepụta mmanya zuru oke, mmanya na-aba n'anya na ụbara na ekpomeekpo na-ebuga mgbagwoju anya nke ose dị ụtọ (ya bụ, licorice, cloves na cinnamon), plums steewed, prunes na mịrị amị. Atụmatụ tar na Roses.
Alberto Marsetti hiwere ubi-vine na 1986 ma o kwenyere na Nebbiolo nwere uto uto na onodu ihu igwe di nma. Ubi-vine dị hectare 10 dị na Sondrio ebe ala dị aja n'ihi nbika nke nkume ndị dị n'elu.
Sfursat della Valtellina DOCG bụ nke kacha ochie na mmanya Valtellina. Ortensio Lando (1540) zoro aka na ya na akwụkwọ ndị ọzọ detu Sforzato dị ka 1300. E bu n'obi were mmanya maka ezinụlọ were mee ya dị ka ọgwụ na-eweghachi ọrịa. Taa, a maara ụdị dị iche iche dị ka mmanya dị mma nke Valtellina. N'ịbụ ndị na-eme agadi na barriques, mmanya ahụ na-emepụta ihe na-esi ísì ụtọ nke Morello-cherry na mmanya nwere tannins dị nro na ezigbo acidity. Jikọta ya na chocolate gbara ọchịchịrị.
Ọdịnihu nke mkpụrụ vaịn ala
A na-ama mkpụrụ vaịn na-adịghị ahụkebe site n'ọtụtụ okwu gụnyere ihe na-adịghị ahụkebe, esoteric, dị egwu, ụmụ amaala, autochthonous ma ọ bụ echefuru. Ndị na-eri mmanya nwere ike ịnọ na-eche ihe mere soms ma ọ bụ geeks mmanya na-atọ ụtọ maka “ịchọpụta” mkpụrụ vaịn ochie. Ọ dị mkpa iburu n'obi na ịṅụ mmanya nke sitere na mkpụrụ vaịn na-adịghị ahụkebe bụ n'ezie "elu" n'ihi na ọ na-enye ihe dị iche iche na mgbanwe nke ụtọ maka onye na-aṅụ mmanya. Ọdịiche dị iche iche na-achọsiwanye ike na ụwa mmanya na ikike nke narị otu narị (ma ọ bụ ọtụtụ puku) nke ụdị mkpụrụ vaịn abụghị naanị ihe dị mkpa dị ka ozi, na-echekwa ụdị dị iche iche na ụwa osisi, ma na-enyekwa akara nchebe n'ihu okpomọkụ zuru ụwa ọnụ.
Mpaghara mmanya n'ofe Europe amalitela ebe a na-elekọta ụmụaka iji chekwaa ụdị ụmụ amaala na-adịghị ahụkebe. N'ebe ndịda France, Domaine de Vassal, ụlọ akwụkwọ ọta akara nke steeti (1878) na-edobe ihe dị ka ụdị 7800, mkpokọta kachasị n'ụwa. Na Savoie, France, Alpine Ampelography Center na-achọ ụdị dị ụkọ. Ọ nwere ụlọ akwụkwọ ọta akara nke ya, na-eme micro-vinification ma na-enwe ọgbakọ ọgbakọ kwa afọ. Wine Mosaic, nke Lean-Luc Etievent na Arnaud Daphy malitere, na-akwado ichebe ụdị mkpụrụ vaịn mbụ nke Mediterranean.
Ọtụtụ "ndị na-elekọta vine" kwenyere na mgbanwe ihu igwe ga-achọ ka mkpụrụ vaịn dị iche iche ga-akụ n'ọdịnihu, ndị na-eto ngwa ngwa, anwụ na-agba ya ngwa ngwa ma ọ bụ na-enye ọdịdị acidity ma ọ bụ tannic ka mma karịa ụdị ndị bụ isi. A na-ahapụ ụdị ochie n'ihi nsonaazụ mmepụta adịghị mma yana ụdị ndị bụ isi nọ n'ihe ize ndụ site na mgbanwe ihu igwe. Ụwa mmanya na-agbalị ịdị njikere maka mgbanwe na ịtụgharị ụdị ochie maka ngwọta ọhụrụ.